ktmkhabar.com - रेखा थापाको प्रश्न– कुन चाहिँ राप्रपाले देश हाक्ने हो
अभिनेत्री रेखा थापाको पहिचान केवल अभिनयमा मात्र छैन । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ पनि हुन् । उनी राजनीतिदेखि सामाजिक विषयमा समय–समयमा फेसबुकमा स्टाटस लेखिरहन्छिन् ।
राप्रपा अघि नेकपामा माओवादीमा रहेकी रेखाले पार्टीको केन्द्रीय विशेष समिति गठनका विषयमा आपत्ति जनाएकी छन् । समितिमा महिलाको उपस्थिति नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहँदा रेखाले पनि पार्टीप्रति आपत्ति र असहमति जनाएकी हुन् ।
उनले फेसबुकमा राप्रपाप्रति प्रश्न गरेकी छन् । ‘कुन चाहिँ राप्रपाले देश हाक्ने हो ? त्यो राप्रपा जसले देशमा को–को मान्छे बस्छन थाहा पाएको हुन्छ । न्यूनतम लैङ्गिक साक्षरता राख्छ, मौलिक वैचारिक नमुना पेश गर्छ, सभ्यताको माग अनुसार इतिहासलाई उन्नत व्याख्या गर्छ, युवा र श्रमिक वर्गमा स्थापित हुँदै जान्छ र संस्थालाई लोकतान्त्रिकरण गर्छ’, उनले लेखेकी छन् ।
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘वा त्यो राप्रपा जो महिलालाई बहिष्करणको नमुना देखाउछ, मजदुर, किसान, श्रमिक र युवासँग डराउछ, विरासतको रुपमा राजनीतिलाई कोठे बनाउछ, बहसमा उत्रिदैन– सम्झौतावादी राजनीति गर्छ, अवैज्ञानिक रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्छ, आत्मसुरक्षा भन्दा अरु सोच्दैन र सधैं रक्षात्मक सोचले ग्रस्त हुन्छ, जनप्रिय मान्छे लत्याउने र आर्थिक हैसियतमा निर्णय गर्दछ ।’
उनले राप्रपाको वैकल्पिक शक्ति र मौलिक रुपमा सबैको पार्टीका विषयमा पनि प्रश्न सोधेकी छन् । ‘कुन चाहिँ राप्रपा वैकल्पिक शक्ति बन्ने हो ? कुन चाहिँ राप्रपा मौलिक रुपमा सबैको पार्टी हो ? कुन चाहिँ राप्रपा उदाउदो राप्रपा हो ? कुन चाहिँ राप्रपा नाम मात्रको पार्टी हो ? कुन चाहिँ राप्रपा व्यवहारमा–वयस्क र रिटायर्डहरुको सरोकार समूह मात्र हो ? कुन राप्रपा हामी सबैको राप्रपा हो ?’, रेखाको प्रश्न छ ।